नबिल र एनबी बैंकको बीग मर्जर पक्का, अन्तिम स्वीकृतीको पत्र राष्ट्र बैंक पुग्योः सीइओ बने अनुभवी बैंकर ढुंगाना ! - Aathikbazarnews.com नबिल र एनबी बैंकको बीग मर्जर पक्का, अन्तिम स्वीकृतीको पत्र राष्ट्र बैंक पुग्योः सीइओ बने अनुभवी बैंकर ढुंगाना ! -
नेपालको पूरानो प्राइभेट सेक्टरको बैंक नबिल बैंक लिमिटेड र पछिल्लो समय राम्रो कर्पोरेट सुशासन र व्यापार बढाएको बैंक एनबी बैंक बीच हुने भनिएको बीग मर्जर अब पक्का पक्की जस्तै भएको छ भन्दा अन्यथा नहोला । दुबै बैंकको विशेष साधारण सभाले मर्ज गर्न सहमती दिएको छ भने मर्ज पछि बन्ने नबिल बैंकको सीइओमा अनुभवी बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई समेत अनुमोदन गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । चर्को विदेशी लगानी रहेको एनबी बैंक र पूरानो नाम कमाएको नबिल बैंक बीच मर्जरको बाटो तत्कालीन एनबी बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले नै खोलेका थिए भन्दा अब फरक पर्दैन ।
एनबी बैंकको प्रमोटार शेयर दिने बारे उजुरी बाजुरी देखि अदालतमा मुद्दा समेत पुग्यो । तर, यसको बाबजुद पनि नबिल बैंक र एनबी बैंक मर्जरमा जाने पक्का पक्की जस्तै देखिन्छ । यी दुबै बैंकले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा मर्जरको अन्तिम स्वीकृतीका लागि हालै पत्र पठाएको समाचार स्रोतको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृती दिएपछि केही महिना भित्रै एनबी र नबिल बैंक बीच मर्जर हुने देखिन्छ । भनिन्छ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले नबिल बैंकमा असार १७ गतेबाट सीइओकारुपमा काम गर्ने छन् भने नबिल बैंकका अध्यक्षमा उपेन्द्र पौड्यालनै रहने सहमती भएको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
दुवै बैंकको विशेष साधारण सभाले एक्विजेशन तथा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।नबिल बैंकको एक सय कित्ता बराबर एनबि बैंकका शेयरधनीहरुले ४३ कित्ता शेयर पाउने सहमति भएको छ । विशेष साधारण सभाले नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्वद्ध व्यवस्थाको आधारमा निर्धारण गरिएको शेयर मुल्य अनुपात १००ः४३ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।
नबिल बैंक लिमिटेड र नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड (एनबि) बीचको मर्जर प्रक्रिया तिव्ररुपमा अगाडी बढेको देखिन्छ । दुवै बैंकको विशेष साधारण सभाले एक्विजेशन तथा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।नबिल बैंकको एक सय कित्ता बराबर एनबि बैंकका शेयरधनीहरुले ४३ कित्ता शेयर पाउने सहमति भएको छ । विशेष साधारण सभाले नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्वद्ध व्यवस्थाको आधारमा निर्धारण गरिएको शेयर मुल्य अनुपात १००ः४३ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।
२०७८ चैत्र मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेपश्चात नबिल बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब ८३ करोड २९ लाख ८ हजार रुपैयाँ, कर्जा रकम ३०९ अर्ब रुपैयाँ र निक्षेप रकम ३२० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यसैगरी बैंकको गैरकोषमा आधारित व्यवसायको आकार १४५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । मर्जर पछि नबिल बैंकको शाखा सञ्जाल बृद्धि भई २५४ पुग्नेछ । त्यसैगरी, ९ महिनाको संयुक्त खुद मुनाफा ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । भन्दा फरक पर्दैन ।
दुबै बैंकको विशेष साधारण सभाले एक्विजेशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेसँगै राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएको भेटिएको छ । साथै केही दिनभित्रमा एकीकृत कारोबार गर्ने बारे सूचना जारी गर्ने तयारी नबिल बैंकको रहेको भेटिएको छ । मर्जर कमिटिले चालु आर्थिक बर्षभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने गरी गृहकार्य जारी राखेको देखिन्छ । ‘जुलाई ४ तारिख अर्थात् असार २० गतेभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने तार्गेट नबिल बैंकको रहेको देखिन्छ । विशेष साधारण सभाको प्रतिवेदन र अन्तिम स्वीकृका लागि राष्ट्र बैंकमा गत सोमबार पत्र पठाइएको खुलेको छ ।
नबिल बैंक लिमिटेड र एनबी बैंक लिमिटेड मर्ज भएपछि नबिल बैंक नेपालकै ठूलो र बलियो बैंक बन्ने पक्का पक्की छ । एनबी र नबिल बैंक मर्जर पछि लगानी, डिपोजिट, चुक्ता पुँजी, शाखा सञ्जाल मात्रै होइन कर्मचारीहरुमा पनि नबिल बैंक ठूलो बैंक बन्ने देखिन्छ । नबिल बैंकमा अनुभबी बैंकरहरुको लामो लाईन नै छ ।
राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी गरिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जर गर्न गत फागुन ३० गते सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो भने गत पुस २९ गते प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो । २०७८ चैत्र मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेपश्चात नबिल बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब ८३ करोड २९ लाख ८ हजार रुपैयाँ, कर्जा रकम ३०९ अर्ब रुपैयाँ र निक्षेप रकम ३२० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यसैगरी बैंकको गैरकोषमा आधारित व्यवसायको आकार १४५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । मर्जर पछि नबिल बैंकको शाखा सञ्जाल बृद्धि भई २५४ पुग्नेछ । त्यसैगरी, ९ महिनाको संयुक्त खुद मुनाफा ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । भन्दा फरक पर्दैन ।
नबिल बैंक लिमिटेड र एनबी बैंक लिमिटेड मर्ज भएपछि नबिल बैंक नेपालकै ठूलो र बलियो बैंक बन्ने पक्का पक्की छ । एनबी र नबिल बैंक मर्जर पछि लगानी, डिपोजिट, चुक्ता पुँजी, शाखा सञ्जाल मात्रै होइन कर्मचारीहरुमा पनि नबिल बैंक ठूलो बैंक बन्ने देखिन्छ । नबिल बैंकमा अनुभबी बैंकरहरुको लामो लाईन नै छ । त्यसपछि पूराना, अनुभवी र दक्ष बैंकर ढुंगाना सीइओ भएपछि बैंकले प्रमोटर र शेयरधनीहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिने आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ । सचेत भया ।
सबैलाई समेट्ने गरी बीमा नीति ल्याउन प्रदेश सरकारसँग बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालको आग्रह
एन आई सी एशिया क्यापिटलको सीईओमा रायमाझी
लकडाउन खुकुलो बनाउँने तयारी अन्तिम चरणमा
सूर्या लाइफको १३.३६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
बैंक अफ काठमाण्डू्का ग्राहक महानुभावहरुलाई ल्याण्डमार्क होटलमा विशेष छुट
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पहिलो पटक डेपुटी सीइओ नियुक्त गर्‍यो